intro နဲ့ ဂျာနယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » intro နဲ့ ဂျာနယ်
intro နဲ့ ဂျာနယ်
Posted by intro on Jun 18, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary, News | 20 comments
တစ်လောက intro တစ်ယောက် ကျောက်တံတားဘက်ကို ရောက်သွားခဲ့တယ်… အဲ့သည့်က နေ ကျောက်မြောင်းဘက်ကို ကိစ္စတစ်ခုနဲ့အသွားမှာ ဘက်စ်ကားစီးရင်းနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကို ပြန်ပြီးဖောက်သည်ချချင်လို့ပါ…
အဲ့သည့်နေ့က ၄၃ကားစီးပြီး ကျောက်မြောင်းဘက်ကို သွားခဲ့တာပေါ့ဗျာ… ၄၃ကားကလဲ အဲကွန်းမဖွင့်၊ မှန်တွေကလဲ အတင်အချလုပ်လို့မရ၊ အချိန်ကလဲ နေ့ခင်းဘက်လောက်ဆိုတော့ စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေါ့ဗျာ… ချွေးကပြိုက်ပြိုက် ဒီကြားထဲ ကားက ဟိုနေရာလူစောင့်ပြီးတင်၊ ဒီနေရာ လူစောင့်ပြီးတင်ဆိုတော့ ဆင်းမယ့် မှတ်တိုင်မရောက်ခင် ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းလဲဗျာ… အဲလိုနဲ့ပဲ သည်းခံပြီးစောင့်လာခဲ့တာ ယုဇနပလာဇာရှေ့ အရောက်လောက်မှာ ကားကလဲ အကြာကြီးရပ်၊ ဈေးသည်တွေကလဲ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် တက်ဆင်းပြီးရောင်းနဲ့ အသံတွေက ဆူညံနေတာပေါ့… အဲသည့်အချိန်မှာပဲ
` သတင်းထူးတွေနော်… ဒီအပါတ် အနုပညာလောကအတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ သီတင်းထူးတွေ ´
` ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် ထောင်(၃)နှစ် ကျသွားတဲ့ သရုပ်ဆောင် န၀ရတ်ရဲ့သတင်း ´
` ရိုင်းပျတဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့် အနုပညာလုပ်ခွင့်မှ (၆)လ ရပ်ဆိုင်းခံရတဲ့ မိုးဟေကိုရဲ့ သတင်း ´
` စေ့စပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သက်မွန်မြင့်ရဲ့ သတင်း ´
` မပြီးဆုံးနိုင်သေးတဲ့ ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ရဲ့ လက်ထပ်ပွဲ နောက်ဆက်တွဲ သတင်း´
……………………………………….. သတင်း ´
သိချင်ရင် ၀ယ်ဖတ်နော် အပြင်ဆိုင်တွေမှာဆို ၅၀၀၊ ၆၀၀ ပေးရတာ၊ ဒီက ဂျာနယ်အသစ်မို့ promotion အနေနဲ့ တစ်စောင်မှ ၂၀၀ ထဲ၊ ၂၀၀ ထဲ ´
စသဖြင့်ဗျာ မျိုးစုံအောင် ပြောသွားတာ… ကားတစ်စီးလုံးလဲ ဟင်၊ ဟယ် ဖြစ်ကုန်ပြီး အဲ့သည့်ဂျာနယ်ကို အလုအယက် ၀ယ်ကုန်ကြပါရောဗျာ… intro လဲ တစ်ကယ်ထင်ပြီး တစ်စောင်ဝယ်မိတာပေါ့… ကိုယ်မြင်လိုက်တာတင် ၅ စောင်လောက် ရောင်းရတာ တွေ့လိုက်မိတယ်… အော်တာသာ ကြာပြီး ရောင်းတာတော့ ခဏလေးဆိုတော့ ဘာဂျာနယ်လဲ၊ ဘယ်နေ့ကထုတ်တာလဲ တောင် ပြန်စစ်ချိန်မရလိုက်ပါဘူး…
ပြီးတော့မှ ၀ယ်မိတဲ့သူတွေ အကုန် ပြုံးစိစိ ဖြစ်ကုန်ရော၊ တစ်ချို့ဆို မျက်နှာကြီးတွေရဲလို့
ဘယ်မှာလဲ န၀ရတ်၊ ဘယ်မှာလဲ မိုးဟေကို၊ ဘယ်မှာလဲ သက်မွန်မြင့်၊ ဘယ်မှာလဲ ပြေတီဦး၊ ဘယ်မှာလဲ….. ? ဘယ်မှာလဲ …..?
အဲ ပြောဖို့ကျန်သွားလို့၊ ၀ယ်ပြီးမှ သိလိုက်ရတာက ဂျာနယ်ကလဲ အသစ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ… ၂လပိုင်းထဲက ထုတ်တဲ့ ဂျာနယ်ကြီးပါ… ဂျာနယ်သစ်ဆိုတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး…
ပြီးတော့မှ သိလိုက်တာက တော်တော်ကို တုံးသေးတဲ့ ငါပါလား ဆိုတာပါပဲ…
ဟုတ်တယ် Intro ယဉ်ငြိမ်း မောင်လေး လည်းခံလိုက်ရတယ်လေ
အို စမာက ဘင်လာဒင်ကို မိပြီဆိုပြီး ရောင်းတာ
မောင်လေးက အိုစမာဗင်လာဒင်ကို မိတာလား
ဘာဆိုတာ သိချင်တာနဲ့ ၀ယ်တာ ဘာမှလဲမဟုတ်ဘူး
ရှေ့ ကာဗာက ဟုတ်တုတ်တုတ်
နောက်က စာရွက်တွေက 2001 က ဟာတွေ တချို့စာရွက်ဆို ဘာတွေမှန်းတောင်မသိ
ဒါကြောင့် ကားပေါ်မှာရောင်းတဲ့ ဘာပစ္စည်းမဆို မ၀ယ်၇ဲတော့ဘူး
အဲဒီလို လူလိမ်တွေကို ပတ်ဝန်းကျင်က ဂျာနယ်ရိုးရိုးရောင်းတဲ့သူတွေက ၀ိုင်းမောင်းထုတ်ဘို့ကောင်းတယ်။
ဒီလုပ်ရပ်မျိုးက ငွေကိုလိမ်ယူရုံမက ၀ယ်တဲ့သူကိုလဲ စော်ကားတဲ့သဘောလို့ ယူဆပါတယ်။
မှန်တယ်ဗျ… ပိုက်ဆံ ၂၀၀ ပါသွားတာထက်၊ ကိုယ်တုံးလို့အလို့၊ ကိုယ်အသုံးမကျလို့ အလိမ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ ရယ်လဲ ရယ်ချင်၊ ဒေါသလဲ ထွက် နေရင်းထိုင်ရင်း အကုသိုလ်ကို ပွားတော့တာပဲ…
ဒီလိုဆို အနော်တို့လည်း သတိထားမှဖြစ်မယ်။
ညိုလေးလဲ အဲဒါမျိုးကြုံခဲ့ဘုးပါတယ် ၊ အဲလို မလှိမ့်တပတ်လုပ်ပီး စီးပွားရှာတာတော့ ဘယ်ကောင်းမလဲ နော်
ခုထက်ထိ အဲဒါမျိုးတွေရောင်းတုန်းပါ ၊လှည်းတန်းမှာဆိုလဲ ဒီလိုပါပဲ ဘယ်မင်းသမီးက ဘာဖြစ်လို့ ညာဖြစ်လို့နဲ့ ညာရောင်းကြတာပါ။ ညိုလေး ဖြင့် အဲ့လိုရောင်းတဲ့သူဆီမှာ ဂျာနယ်ဝယ်ပီးတော့ ဘယ်မှာပါလို့လဲ ဘာညာ မေးလိုက်ချင်တာပါ ။ မမေးရဲလို့သား)
500ပေးရတာကို ကိုယ့်အနားလာပြီး 200နဲ့ရောင်းတယ်ဆိုကတဲက
ဟုတ်ပ ကိုပေါက်ရာ… ကားကလဲ ထွက်တော့မယ်၊ ရောင်းဈေးကလဲ ၂၀၀ ဆိုတာနဲ့ သိပ်များများ စားစား မစဉ်းစားနိုင်လိုက်ဘူးလေ…. ပေါချောင်တိုင်း မကောင်းနိုင်ဘူး ဆိုတာကို မေ့သွားတယ်ဗျာ…
အပေါကြိုက်တဲ့ ကိုintro တယောက် ခံလိုက်၇ခြင်းဆိုပြီး ပို့စ်တခုထပ်ရေးလေ
တိုင်မှသာ ဖမ်းမယ်ဆို ရင်တောင် ထားစရာနေရာမရှိဘူး အီးကယ်ဂျန်ရဲ့
မန်းလေးဂေဇက်တွင် ရထားသော ပွိုင့်များအား သဂျီးမင်းမှ အထူးအစီအစဉ်ဖြင့် တပွိုင့်တဒေါ်လာနှုန်း လမကုန်ခင်အပြီး လဲပေးတော့မည်ဆိုခြင်း….
မှတ်ချက်။ ၎င်းအကြောင်းအရာပါ ပို့စ်ကိုရွာထဲတွင်ရှာ၍ မှတ်ချက်တွင် မိမိအမည်နှင့် ပွိုင့်အရေအတွက်ကို တင်ပြတောင်းခံရန်ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ချိန်ထက် နောက်ကြတောင်းခံသူများ အကြုံးမဝင်ပါ။
ဒုတိယ ရွာသဂျီး လက်ထောက် ကြောင်ကြီး
နောက်ဆက်တွဲ … ၄င်းလဲလှယ်ပြီးသောငွေများကို မြန်မာငွေဖြင့်ပြန်အမ်းမည် မဟုတ်ပဲ ဒေါ်လာကိုသာ ၂၀၁၁ ဖေဖော်ဝါ၇ီလ ၃၁ရက်နေ့ နံနက် ၁၀နာရီ တိတိ တွင် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း…..။
မြို့ထဲမသွားဖူးဘူးနဲ့တူတယ်။ ဒါဆို အင်ထိုကို ရောင်းစားလို့ရပြီ…. အဟိ
ပြောပါသေးတယ် နေပူရင် နေကာ၊ အိုက်ရင် ယပ်ခပ် တာနဲ့တင်တန်နေပါပီ
၂၀၀ ဆိုတာ ကွမ်စား ဆေးသောက် ကျပျောက်သလောက်ပဲရှိပါတယ် တဲ့
ှုIntro မြို့ထဲမှာမှမဟုတ်ဘူးနော် စံပြဈေးဘက်ရောက်ရင်လဲ သတိထား
လူတွေကို အကျိုးမပြုတဲ့ ဈေးသည် စာရင်း ပြုစုပြီး
လူတွေကို ပညာပေး သင့်ပြီ.. တချို့လဲ ကိုယ်တိုင် ခံခဲ့ရပေမဲ့
ရှက်ပြီး ပြန်မပြောဘဲ နေတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။
တကယ်ဆို ရှက်တာထက် ကိုယ့်လို သူများတွေ မခံရအောင်
ဖေါ်ထုတ်ပေးရင် ဒီလို လူလိမ်တွေ ပျောက်သွားမှာ။